इन्धन शीर्षकमा मन्त्रालयको तेल हालेर नगद खल्तीमा हाल्ने मन्त्रीहरू हेर्नुहोस ! « Postpati – News For All
इन्धन शीर्षकमा मन्त्रालयको तेल हालेर नगद खल्तीमा हाल्ने मन्त्रीहरू हेर्नुहोस !
पौष ०५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहेका छन्, यो खबर नयाँ पत्रिकाका लागि पुष्प ढुंगानाले समाचार लेखेका छन् ।
५ पुष २०७५, बिहीबार को दिन प्रकाशित